5 mahara maapplication kwenguva shoma | IPhone nhau
Isu tinodzokera kumutoro zvakare takazivisa vaverengi vedu mafomu mashanu, panguva ino isu tinosiya mitambo yanhasi, inova tinogona kurodha mahara zvachose uyezve hatina kutenga mu-app. Muchinyorwa chino tinowana mafomu ekushandura zvinyorwa kubva kumifananidzo, vashanduri kuenda kumafaira ePDF, nyanzvi yekunyora zvinyorwa, application yekusanganisa mimhanzi uye imwe kuitira kuti tirege kukanganwa mabasa edu ezuva nezuva.
1 Dudziro Photo
2 PDF Converter uye Printer Pro
3 Audio Notebook Homwe: Rekodhi Ruzha uye manotsi
4 Ita - Chinyorwa - Kugadzira App
5 WeDJ ye iPhone
Dudziro Photo ndicho chikumbiro chakakwana kuti ugone dudzira chinyorwa chatinowana mumabhuku, zvinyorwa, zviratidzo, zviziviso…. Inotsigira inopfuura mitauro makumi mapfumbamwe. Isu tinongofanirwa kutora pikicha yenyaya iri kutaurwa uye toipfuudza kuburikidza neDudziro Photo kuti tiwane kushandurwa kwayo mumutauro wedu. Dudziro Photo ine mutengo wenguva dzose we90 euros muApp Store.
PDF Converter uye Printer Pro
PDF Converter uye Printer Pro inotitendera chinja mafaera ePDF kubva kumifananidzo, kumutumira mameseji, mapeji ewebhu, maemail, clipboard zvemukati, kutaurirana uye chero imwe mhando yefaira yatinayo pane yedu iPhone.PDF Converter uye Printer Pro ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros muApp Store.
Audio Notebook Homwe: Rekodhi Ruzha uye manotsi
Ichi chishandiso chakanakira vese avo vanhu avo nekudikanwa ivo vanofanirwa kugara vaine rekodha padyo iyo inovabvumidza kuronga yega yega yega marekodhi avanogadzira. Audio Notebook Pocket: Rwiyo Rekodhi uye manotsi ane mutengo wenguva dzose we1,99 euros.
Audio Notebook Homwe2,99 €
Ita - Chinyorwa - Kugadzira App
Ita inotibatsira kuti tione nyora uye nyora manyore nenzira inokurumidza, yakapusa uye inonakidza. Kana mabasa akanyorwa apedzwa, tinogona kuendesa kumarara, kuabvisa kana kuvanonotsa kuitira kuti vagotizivisa rimwe zuva. Ita ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye1,99 euros.
Ita - Anonyora Zvaunodavakasununguka
WeDJ ye iPhone
Sezvo zvinogona kuderedzwa kubva pazita, nekuda kweichi chishandiso isu tichakwanisa tanga kuita matanho edu ekutanga saDJ. WeDJ ye iPhone ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye0,99 euros.
WeDJ ye iPhonevakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 5 emahara maapplication kwenguva shoma
Apple inoburitsa yeruzhinji beta 2 yeIOS 10.2.1 uye macOS Sierra 10.12.3